Imishini ekhethekile | Umlimi wasemadlelweni we-intanethi | April 2020
Isigaba Imishini ekhethekile
I-it-ngokwakho iqhwa leqhwa: izinto, ukuklama, ukukhiqiza
Imishini yokwenza isithwathwa eyenziwe ngokwayo yathandwa kakhulu phakathi kwezakhamuzi zasehlobo nezakhamuzi zasemaphandleni iminyaka eminingi. Futhi akumangazi, ngoba wonke umnikazi wendawo ye-dacha ubhekene nenkinga yokukhishwa kweqhwa ebusika. Yiqiniso, lokhu kungenziwa ngesandla, ehlome inhlavu, kodwa kuzothatha isikhathi esiningi futhi kuzodinga umzamo womzimba.
Indlela yokukhetha i-lawnmower yokunikeza: izinhlobo zama-lawnmowers, amamodeli athandwayo, izinketho zokukhetha
Emazweni amaningi athuthukayo e-Old World kukhona inkulumo ethi inani lelawns elihle lingafakwa kuphela kulabo abahlala benquma iminyaka engu-200. Namuhla, kunzima ukukholelwa ukuthi umnikazi womninikhaya uzochitha isikhathi esinjalo esibalulekile. Lokhu akumangazi, ngoba ngokunakekelwa kahle, indawo enqabile neyomile yensimbi ibonakala kuphela ngemva kokwehla.
Amathuluzi esivini: indlela yokugcizelela uhla lwezinketho ngezandla zakho
Umnikazi ngamunye we-chainsaw kufanele akwazi ukuzimela ngokuzimela umshini womshini wakhe. Phela, kunezimo lapho kungekho ndawo yokulinda usizo kulolu daba: shayela umninimzi othandekayo, noma uhambe kude naye. Kulokhu, uzodinga izincomo zethu ekuqaliseni uchungechunge lwe-chainsaw. Yini edingekayo ekuqaliseni i-chainsaw, ukuthi ungaqonda kanjani ukuthi uketshezi luye lwaba mkhulu Isiqinisekiso somsebenzi omude we-saw yakho kuyisondlo esifanele.
Umshini wokuklama we-Chainsaw: isimiso sokusebenza, izinhlobo, izeluleko zokukhetha
I-chiansaw - ithuluzi elingenakuphulukiswa lokucubungula izinkuni. Isetshenziselwa ukusika izihlahla, ukusika izihlahla kanye nezihlahla. Ukusebenza okujulile kwengxenye ebona ithuluzi kuholela ekugqokeni kwayo. Ukuze ubuyisele ithuluzi ukusebenza, udinga ukuhlaziya izinketho zezinketho. Ithuluzi elilula kunazo lale umshini we-chainsaw ohlose.
Ukulungiswa kwe-lawnmower ngokwakho-ke: izimbangela ezinkulu zezinkinga nokuqedwa kwazo
Abanikazi bezitshalo ezinhle nezitshalo abasebenzisa ama-mowers angagcina angena ezinkingeni ngenkathi esebenza. Kulesi sihloko sizokutshela indlela yokulungisa ama-mowers e-petroleum ngezandla zakho, kanye nokuthi uzofunda izimbangela ezivamile zokuphazamiseka kwale divayisi. Izici zesakhiwo samagundane asetshanini Amandla amakhulu amaningi alawulwa ngokusunduza ngemuva, kodwa kunamamodeli angalawulwa esebenzisa isondo.
Ukufaka uchungechunge lwe-chainsaw, indlela yokuphikisana kahle nokuhlola ukucindezeleka
Uma une-chainsaw ekhaya, kufanele wazi ukuthi ukunakekelwa okukhethekile kuyadingeka kuso. Kubalulekile ukuhlanza ngezikhathi ezithile nokuhlaziya amaketanga, ukuhlanza ukuhlunga umoya, ukunikezwa kwamafutha kanye namathayi. Futhi-ke, kuyadingeka ukuqapha ukuhlukumeza kweketheni, njengokungezwani kwezinga eliphansi kunengozi hhayi nje ukulimaza i-saw, kodwa futhi nempilo yakho uma i-chain ngesivinini esikhulu iqhuma.
Iyini umlimi: uhlelo kanye nenhloso yedivayisi
Ukuze uthole isivuno esihle, kubalulekile ukudala izimo ezihle zezitshalo nomhlabathi. Umhlaba kumele ube nomsoco kanye ne-oxygen. Ukwenza lokhu, phuthuma ukulimala ngosizo lomlimi. Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi ukulima kungakanani nokuthi yiziphi izinhlobo ezisetshenziswa kakhulu. Incazelo yedivaysi Umlimi ngumshini wezolimo osetshenziselwa ukulima umhlaba.
Indlela yokukhetha i-snow blower ukunikeza, amathiphu namasu
Lapho kuqala ubusika wangempela, ukujabulisa izingane, izintaba zeqhwa zivela emigwaqweni yethu. Kodwa hhayi yonke imvula eqhwa ebusika ngenjabulo. Ikhathazeke kakhulu ngendaba yokukhishwa kweqhwa ama-cottages nemindeni yangasese. Amathuluzi amasha anjalo njengefosholo afanelekile, kodwa kulula kakhulu ukusebenzisa izindlela zanamuhla.
MTZ-892: izici zobuchwepheshe kanye namakhono wegrekta
Namuhla, ezolimo usezingeni elingakaze lenzeke ngaphandle kokuheha imishini ekhethekile. Okuthandwa kakhulu yizinhlobo ezahlukene zetractor, ezingasetshenziselwa uhlobo olulodwa lomsebenzi, futhi ngesikhathi esifanayo eziningana. Ake sicabangele incazelo yomdwebo we-MTZ wonke we-MTZ 892, izici zayo.
Izitshalo zokujikeleza ezenziwe ngokwenziwe kanye ne-segment for motoblock zenze ngokwakho
Ezolimo, sivame ukubhekana nokhula, futhi kulokhu asikwazi ukukwenza ngaphandle komkhumbi. Esihlokweni sethu sizokutshela ukuthi yiziphi izinhlobo zamathuluzi nokuthi ungenza kanjani umshini wokugaya wena ngokwakho. Izici zokwakha Uma ungumnikazi wendlu yezwe noma indlu ehlobo, khona-ke ngokuqinisekile uzobhekana nokutshani, ukhula kanye nezihlahla ezingadingekile.
Imisebenzi esemqoka nezici zobuchwepheshe ze-bulldozer T-170
Kulesi sihloko, sizofunda ngemishini eyakhayo yokwakha, ebizwa ngokuthi "i-classic" yokwakhiwa komhlaba, umlando wemboni yaseSoviet, okuyi-bulldozer ye-T-170. Incazelo kanye nokuguqulwa kwe-tractor yezimboni ze-T-170 bulldozer yindlela yokwakhiwa kwamaSoviet kanye nemoto yezimboni, eyakhiwe ngokuthuthukisa itekisi yezintambo ezingu-T-130.
Imigomo yokukhetha umshini wokugaya ugesi, indlela yokukhetha umsizi wokunikeza
Lesi sihloko sithinta ithuluzi elithandwayo phakathi kwezakhamuzi zasehlobo nabanikazi bezindlu ezizimele njengomshini wokugaya. Ububanzi bawo njengamanje bukhulu kakhulu, ngakho-ke sihlehlisiwe futhi sithuthukisa lonke ulwazi. Sinikeza ukunakwa kwakho uhlobo lwemilayezo ekukhethweni kwale nyunithi.
Miracle Spade-Mug: Izici kanye Izinzuzo Ukusebenzisa Amathuluzi Garden
Isikhathi sokulima siqala ngokumba isakhiwo. Futhi ngaphandle kwefosholo namafoloko okwenza lo msebenzi akunakwenzeka. Ngokuvamile, ukusebenza kwisayithi kuhambisane nobuhlungu be-back and exertion ngokomzimba. Kodwa namuhla, ukuthuthukiswa kwamuva kusiza ukunciphisa umsebenzi wokusebenza nokusheshisa ukuhamba komsebenzi. Futhi ithuluzi eliyinhloko ukuthi zonke izivande kufanele zibe ne-Mole spade. "
I-trekta encane yomndeni: izici zobuchwepheshe "Uraltsa-220"
Amaminithi amancane omkhiqizo wama-Uralets amathrekhi amancane akhiwa yiChina neRussia. Imishini enjalo isetshenziselwa umasipala kanye nokulima ukusetshenziselwa ekhaya nokuthutha izimpahla. Incazelo Yomfanekiso I-Uralets-220 mini ugandaganda yiyona ndlela endala kunazo zonke emgqeni (kune-Uralets-160 ne-Uralets-180 mini tractors).
I-MTZ 320 ingaba yini kwezolimo?
Namuhla, amataretha asakazeke, kungakhathaliseki ukuthi isayizi noma ukufaka izicelo ezimboni ezahlukene. Omunye wabamele abathandwa kakhulu yi-MTZ 320 ugandaganda, ongowomshini wokudonsa wonke umuntu ohlobo lwesondo. I-MTZ 320: incazelo emfushane ye- "Belarus" inesimo se-wheel 4x4 futhi ifakiwe ekilasini le-traction 0.6.
Ukukhetha i-trimmer kagesi
Utshani oluhle futhi oluhlotshiswe kahle luwumhlobiso wendawo yegceke kanye nensimu. Ukubamba utshani ngokucophelela futhi ngokulinganayo kudla isikhathi esiningi, ngakho-ke inqubekela phambili ifika ekusizeni ngokusinika amathuluzi okunakekelwa okuhlukahlukene. Kuhlala kuphela ukucacisa ukuthi yiyiphi kubo - ukukhetha i-lawnmower, motokosa noma i-trimmer.
Isitshalo se-Vladimir: Incazelo kanye nesithombe se-trekta T-30
Ngenxa yokuhamba kwesikhathi kanye nokugqoka okungenakugwemeka kweTrekta T-25, ubuholi be-Vladimir Tractor Plant banquma ukuqeda ukukhiqizwa kwe-T-25 model futhi baqale isigaba esisha ekukhiqizeni imodeli ephakeme kakhulu ye-T-30. "I-Vladimirets" T-30 I-T-30 itekta iyisetshenziswa esisebenzisekayo, ngokungafani neminye imishini yamaklasi, umshini.
Ukukwazi ne-mini-trekta "i-Belarus-132n": izici zobuchwepheshe nencazelo
Lapho kuqala intwasahlobo, umlimi ngamunye ukwandisa kakhulu inani lomsebenzi emasimini. Inhlabathi kufanele ihlungwe, kufanele kwenziwe umquba, futhi enye kufanele ikhohliwe mayelana nokucubungula kwamaprotato angaphakathi. Ukusiza ukuqaliswa kokusebenza okunjalo emkhakheni kungenza mini-ugandaganda MTZ "i-Belarus-132n" - umshini oguquguqukayo owenza umsebenzi ohlukahlukene emhlabeni.
Indlela yokukhetha umlimi oyimoto, engabizi futhi enokwethenjelwa
Владельцы больших участков часто присматриваются к "малой механизации". Le nqubo iphelele ngamacala lapho ukucubungula amabhuku sekuvele kunzima, futhi ugandaganda usalokhu kuseduze kusayithi. Yiqiniso, ngifuna amadivayisi afanele afake izinhlobo eziningi zomsebenzi. Sifunda kabanzi mayelana nokuthi singakhetha kanjani umlimi ofanelekayo endlini enkulu yezwe.
Indlela yokwenza amaqanda amazambane ngezandla zakho
Noma ubani osebenza epulazini lakhe uyazi ukuthi kunzima kanjani ukutshala amazambane. Ukuze kusetshenziswe le nqubo, kusetshenziswe idivaysi efana nesitshalo sezambane. Incazelo kanye nenjongo yokwakhiwa I-potato planter iyisidingo esinciphisa ukusetshenziswa komsebenzi womuntu onzima wokutshala amazambane, ngoba kunele ukuyifaka kumuntu ohambahambayo, ugcwalise izilimo eziyizigaxa, futhi idivayisi ngokwayo iyokwephula umsele, uyibeke phansi bese ufafaza umhlaba, futhi uqhuba kuphela imishini yokuzimela Ungakhohlwa ukugcwalisa izidakamizwa.
Indlela yokukhulisa uyenmusmus ekhaya
I-Muscat yamagilebhisi iRusbol: incazelo ehlukahlukene enezimpawu nokubuyekezwa
Umuthi wokuhlolisana wabanogwaja: kanjani ukuzala nokweqa